ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ကလေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေဖို့ ကြံစည်မှုတွေက နှစ်ဆအထိမြင့်တက်နေ
Home Lotaya ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေဖို့ ကြိုးစားမှုတွေက နှစ်ဆအထိမြင့်တက်နေ
စိတ်အပြောင်းအလဲတွေ၊ ပုန်ကန်မှုတွေ၊ အထီးကျန်မှုတွေက မိဘအများစုက သူတို့ကလေး (သို့) ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမှန်အပြုအမူရယ်လို့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျောက်သက်တွေရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်သူနားလည်နိုင်မလဲ? ကောင်းပြီလေ။ တကယ်ဆို ဒါဟာ မှားနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေက ပိုမှောင်မိုက်တဲ့တစ်စုံတစ်ရာ (သို့) သတ်သေခြင်းတွေကို ဦးတည်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေဖို့ ကြံစည်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုအတွက် အရေးပေါ်ခန်းတွေကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ US က ကလေးသူငယ်တွေနှင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ နှစ်ဆအထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ CNN က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာတွေက အုပ်ချူပ်ရေးမှုတွေက ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေဖို့ ကြံစည်ခြင်း (သို့) ကြိုးစားခြင်းမှာ အသက် (၅) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်အကြားကလေးအရေအတွက်ကို ပိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလည်း စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ၅၈၀၀၀၀ ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ ၁.၁၂ သန်းအထိမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ JAMA Pediatrics မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်တွက်ချက်မှုအရ ၁၃ နှစ်အရွယ်တွေက အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၅ နှစ်ကနေပြီးတော့ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကြားကလေးတွေက ၄၃ % အထိ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
”ဒီကိန်းဂဏန်းက အရမ်းစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်” ဒေါက်တာ Brett Burstein က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သာမန်လူတွေအတွက် အရမ်းအံ့ဩစရာကောင်းပေမယ့်လည်း ကလေးစိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်တွေက မအံ့ဩကြပါဘူး။ ”ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေက သိသိသာသာမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတာ ငါတို့သိတယ်”လို့ မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံလူငယ်ကျန်းမာရေးဌာနက အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Dr. Gene Beresin က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။ ဒီအကြီးအကျယ်တိုးပွားလာကတော့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက ကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာ ဖိစီးမှုနှင့် ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ Beresin က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ”ကလေးတွေဟာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖိအားတွေပိုများလာတယ်၊ ကျောင်းမှာလည်း ဖိအားတွေရှိတယ်။ အရင်နှစ်တွေထက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရခြင်းကို ပိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်”လို့ သူက ဆက်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် မိဘတွေနှင့် အုပ်ထိန်းသူတွေကလည်း ဖိစီးမှုတွေပိုခံရပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၂၀) အတွင်းမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှုနှုန်းက အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးမှာ မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ဖိစီးမှုက ကလေးငယ်တွေဆီကို ရောက်သွားတယ်။ Beresin က ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် မှောင်မိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖက်စလုံးက ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းလိုမျိုးတွေကလည်း ကလေးတွေမိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေဖို့ ကြိုးစားခြင်းရဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
CDC ရဲ့ အဆိုအရ US အထက်တန်းကျောင်းသား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က သူတို့ဟာ ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်းတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှုအပြုအမူတွေတိုးပွားလာခြင်းအတွက် အဓိကအချက်မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ Beresin က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် သူတို့ကို သင်တို့နဲ့ အတူတူထားပါ။ မဟုတ်ရင် ပြဿနာပေါ်လာတော့မယ်။
US မှာ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်အရေအတွက် ကလေးလူနာ တစ်သိန်းမှာမှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန် ၁၇ ယောက်သာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုတွေရရှိဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုအထိစောင့်ရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကလေးရဲ့ အခြေအနေက ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ပြီးတော့ ကုသမှုတွေရရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေနှင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေ (၇) ဦး မှာ (၁) ဦးက စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေပြီးတော့ တစ်ဝက်လောက်က ကုသမှုမခံရပါဘူး။
ဒါ့အပြင်ကလေးတွေဟာ အက်ကြောင်းတွေများစွာရှိနေတတ်ပြီးတော့ မိသားစုတွေက ကလေးတွေလိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေမပေးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီပြဿနာက ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးတော့ သင်သိတဲ့ကလေး (သို့) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကိုတောင် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ရှုခြင်းက သင့်အတွက် ပြဿနာတွေကို ပိုရှင်းလင်းအောင်နားလည်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုတောင် သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
Ref-womenworking, edition , usnews
Previous articleဆယ်ကျော်သက် သားသားတွေကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲ?
Next articleကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျော့ချဖို့ မိဘတွေကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ချက်